Joe Gomez Oo Kashifay FALSAFADDA Tababare Jurgen Klopp Ee Guulaha Gaadhsiisay Liverpool | Laacib.net
Joe Gomez Oo Kashifay FALSAFADDA Tababare Jurgen Klopp Ee Guulaha Gaadhsiisay Liverpool
January 26, 2020 Abdiwahab Ahmed Comments Off on Joe Gomez Oo Kashifay FALSAFADDA Tababare Jurgen Klopp Ee Guulaha Gaadhsiisay Liverpool
Difaaca Liverpool ee Joe Gomez ayaa daboolka ka qaaday falsafadda ciyaareed ee tababarihiisa Jurgen Klopp ee guulaha gaadhsiisay Liverpool, taas oo sabab u noqotay in ay ku guuleystaan Champions League xili ciyaareedkii hore, sidoo kalena hal dhibic oo kaliya lagaga qaado Premier League, halka ay xili ciyaareedkanna hoggaanka 16 dhibcood ku hayaan.
Gomez waxa uu aaminsan yahay in falsafadda tababarihiisu ay caawinayso ciyaaryahannada da’da yar inay ku saldhigaan Anfield, isla markaana ay sameeyaan wacdaro la mid ah sidii ay yeeleen kulankii FA Cup ee Everton oo ay ciyaartooyo kulliyadda oo uu tababare Klopp soo safay ay ku garaaceen.
Jones, Rhian Brewster, Harvey Elliott, Neco Williams iyo Nat Phillips ayaa dhamaantood kusoo bilowday kulankaas, waxaana ka daba yimid Yasser Larouci oo ka faa’iidaystaay dhaawacii James Milner oo toban daqiiqadood oo kaliya garoonka ku jiray. Ki-Jana Hoever, Sepp van den Berg iyo goolhaye Caoimhin Kelleher ayaa iyaguna doorkooda qaatay kulankaas.
Joe Gomez oo hadlayey ka hor ciyaarta maanta ee FA Cup-ka ayaa waxa uu faahfaahiyey taatikada tababarihiisa iyo sida ay u tahay mid u jandheedha horumarinta ciyaartoyga da’da yar, waxaanu yidhi: “(Falsafadda Klopp) waxay ahayd mid soo martay safar dheer oo ah dhismaha qaab-ciyaareed aan ognahay in dhamaanteen aan la qabsanay. Nasiib badan ayay ahayd in uu Klopp halkan yimid bilo ka hor intii aanan anigu imanin, waxaanu qoof walba oo gudaha iyo bannaanka kooxda joogaa xasuusan yahay sida uu u doonayey in aanu u ciyaarno, falsafaddiisuna waxana waanu isla saldhignay, waana waxa aanu isku dayno in aanu samayno ciyaar walba, waxaanu tababarka ku samaynaa wax ka badan 11vs11.
“Waxay xoojisaa (Falsafaddiisu) sida uu u doonayo inaanu u ciyaarno iyo sida uu u rabo in loo habaysnaado.
“Amaan badan ayuu ku dan yahay, waa tababare heer caalami ah oo awood u leh inuu xoojiso falsafaddaas oo uu marba dhinac u dhigo.
“Marka ay ciyaaraha waqtiyo kooban u dhexeeyaan ee ay suurtogalka tahay in aanaan isla tababarkii samaynin, wali waxa uu helaa jid uu farriintiisa ku gudbiyo.
“Isku-duubnaan, koox u wada shaqayn, waxa aanu leenahay qaab ciyaareed iyo tababar aanu maalin walba kusoo bandhigno iyadoo qof walba uu garanayo shaqadiisa iyo doorkiisa. Waana inaanu ku ciyaarno farxad iyo khibrad.”
Intaa kaddib waxa uu Joe Gomez ka hadlay fursadda ay ciyaartoyga da’da yar isku muujin karaan ee ay maanta haystaan, waxaanu yidhi: “Wax kasta oo ay qabteen iyagaa hadlaya. Ciyaartooyo badan oo heersare ah. Waa kuwo da’yar oo awood u leh inay wax badan qabtaan, waanay muujiyeen. Waxay ila tahay in Axadda ay u noqonayso fursad kale, wayna ogyihiin.”